ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်)	Posted on August 10, 2009	by mettayate မိမိသည် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လား။ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လား။ မိမိသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် ခံယူထိုက်ပြီလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းများကို သိချင်ရင်တော့ မိဂါဒါဝုန်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) တရားတော်များကို နာကြားပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆရာတော်သည် မိုးကုတ်ဝိပဿနာ မှ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်သည် သာသနာ့အကျိုးကို ရှေးမူးထားပြီး တရားဓမ္မများကို ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့်တိုင်အောင် မြန်မာပြည်အနှံ့လှည့်လည် တရားဟောကြားနေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါး အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ရခဲခြင်း ၅ ပါးမှာ- ဘုရားတစ်ဆူပွင့်ရခြင်းဟာ အင်မတန်မှ တွေ့ကြုံခဲရလှပါတယ်။ အနန္တ ကျေးဇူးရှင် မဟာ မေတ္တာ ကရုဏာရှင် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာနှစ် ၅၀၀၀ အတွင်း (ယခု သာသနာတော်နှစ် ၂၅၅၃ ခုနှစ်) မှာ ကျမတို့ဟာ ရခဲလှသော လူ့ဘ၀ရခြင်း နှင့် နာကြားခွင့် ရခဲလှသော ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာတရားတော်ကြီးကို တွေ့ကြုံခွင့်ရနေကြပြီးမို့ ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ပွင့်ခဲသောဘုရားရှင်တွေနဲ့ လွှဲခဲ့ကြပေမယ့် ဒီဘ၀မှာတော့ အနည်းဆုံး အပါယ်တံခါးပိတ်အောင် အားထုတ်ရင်းနဲ့ သာသနာတည်တံ့ပြန့်ပွားရေးအတွက် ကျမတို့လည်း ပါဝင်ကြပါစို့လို့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းများကို နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
မုံရွာမြို့”ထပ်မမှားစေနဲ့” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် (၅)ရက် တရား။ တရား ၉ မှ ၁၆ အထိ ညောင်ဦးမြို့ “ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ” (၃) ရက် တရား၊
This entry was posted in တရားတော်များ and tagged ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်). Bookmark the permalink.	← မင်္ဂလာတရား ၃၈-ပါး